जाडोमा यसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ - NepalKhoj
जाडोमा यसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ
नेपालखोज २०७६ मंसिर २२ गते ६:५९
१. पर्याप्त घाम ताप्नुहोस
जाडो मौसममा धेरैलाई थकाइ लाग्ने गर्छ । यस्तो हुने कारण हो घामको प्रकाशको कमी । जसले निद्रा र जागै बस्ने हाम्रो दैनिकीको चक्र गडबड हुन्छ । त्यसैले, सम्भव भएसम्म घाम ताप्न बाहिर निस्किनुस् । निद्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने हुनाले करिब ८ घण्टा सुत्ने गर्नुहोस् । तनाव घटाउन शारीरक कसरत वा योग गर्नुहोस् ।
२. पर्याप्त फलफूल र तरकारी खानुहोस
बाहिर चिसो र हुस्सु लागेको बेला हामीलाई फलफूल र तरकारी खान मन लाग्दैन् । बरु, तातो र गुलिया खानेकुरा खाएर पेट भर्नतिर हामी लाग्छौँ । तर, त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । गाजर, सलगमजस्ता तरकारीलाई उसिनेर, रोस्ट गरेर वा सुप बनाएर पनि खान सकिन्छ ।
३. दूध खानुहोस
हिउँदमा चिसो लाग्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । त्यसैले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो दुग्धपदार्थ सेवन । चीज, दहीजस्ता दुग्ध पदार्थमा हाम्रो शरीरलाई चाहिने प्रोटिन, भिटमिन ए र बी १, क्याल्सियम पाइन्छ ।
घरभित्र बसिरहनु हानिकारक छ । त्यसैले जगिङ गर्ने, सन्ध्याकालीन भ्रमणमा निस्किने गर्नुस् । पकाउन, कुकुर डुलाउन वा नाच्न व्यस्त रहनुस् । घरभित्रै रहनुपर्ने भएपनि शारीरिक गतिविधि हुने काममा लाग्नुहोस् । सकेसम्म सामाजिक हुन सिक्नुहोस् । एक्लै धुम्धुम्ती बस्दा तनाव बढ्न सक्छ ।
५. चिया पिउनुहुन्न? सुरु गर्नुस
चिया प्राचीनकालीन पेयपदार्थ हो । यसका निश्चित फाइदा पनि छन् । ब्ल्याक र ग्रिन टीमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने रसायन हुने गर्छ । यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ । चिया पर्याप्त पिउने मानिसमा मुटुरोग कम लाग्ने गरेको अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले चिया पिएर जाडोमा सुरक्षित बस्नुहोस् ।